The disk is write-protected ပြဿနာဖြေရှင်းနည်း (Update) ~ ဇင်ကို(နည်းပညာ)
The disk is write-protected ပြဿနာဖြေရှင်းနည်း (Update)
10:38:00 am ကွန်ပျူတာနည်းပညာ No comments
Flash drive write protected error solution
Flash drive stick တွေ မှာ အဖြစ် များတဲ့ write protected error warning ကို ဖြေ ရှင်း နည်း လေး ပါ.. ဖြစ် တာ က တော့ Flash တွေ Remove မပေး ပဲ ဆွဲ ဆွဲ ဖြုတ် တဲံ့ အခါ တွေ ဖြစ် တာ များ ပါတယ်... အဲ့ လို Error တက် ခဲ့ ရင် Format လို့ လည်း မရ ပါ ဘူး ဖွင့် လို့ လည်း မရ ပါ ဘုး အဲ့လို ဖြစ် တတ် ပါ တယ်.. အဲ့ လို မျိုး ကျ ရင် ဖြေရှင်း ဖို့ နည်း လမ်း ပါ...
အဆင့် ၁) ဒေါင်း ဖို့ ဖိုင် သုံး ခု ပေး ထား ပါတယ်... နစ် ခု က Registry key ကို ပြင် တဲ့ ဟာ ပါ..Enable USB Write နဲ့ Disable USB Write ဖို ဒါ နစ် ခု ပါ ဒေါင်း လုပ် တစ်လင့် က တော့ Repair_v2.9.1.1 ဆို တဲ့ ဖို ဒါပါ.. အဲ့ ကောင် က တော့ ပြင် တာ မဟုတ် ပါ ဘူး format ချ တာ ပါ...
အဆင့် ၂) ဖိုင် ၃ ခု လုံး ကို ဒေါင်း ပီး ရင် error တက် နေ တဲ့ Flash Disk (USB)ကို စက် မှာ တပ် ပါ... စော န ဒေါင်း ထား တဲ့ Enable USB Write နဲ့ Disable USB Write ကို Run as admin နဲ့ Run ပါ. Yes or No ဆို Yes ပေး လိုက် ပါ.. Restart ကျ ပါ လိမ့်  မယ်... မိ မိ Flash Disk (USB)ကို ဖြုတ် ပီး Restart ချ ပါ ... စက် ပြန် တက် လာ ပါ က Flash Disk (USB) ကို ပြန် တပ် ပါ.. အကယ်၍ Error တက် နေ သေး တယ် ဆို ရင် တော့ Repair v2.9.1.1 ကို ရမ်း ပါ... Flash Disk (USB) ကို တပ် ရင်း လုပ် ပါ.. Format Auto လုပ် ပါ လိမ့် မယ်... Format ပီး ရင် တော့ Error မတက် ပဲ မူ လ ပုံ စံ အတိုင်း အလုပ် ပြန် လုပ် ပါ ပြီ...
အခမဲ့ဆိုတဲ့ အရာတိုင်းမှာ ခန့် မှန်းလို့မရနိုင်တဲ့ တန်ဖိုးတစ်ခုတော့ အမြဲရှိနေပါတယ်.
ဒေါင်း လုပ် ရ ယူ ရန်
( ဗီဒီ ယို မှာ လည်း ကြည့် နိင် ပါ တယ်)
Remove write protection from usb.
This wil delete all files in usb